Akayizwa eyokulahlekelwa uJali kwiSundowns uMngqithi - Impempe
Akayizwa eyokulahlekelwa uJali kwiSundowns uMngqithi
Kungaba yishwa ukuthi iMamelodi Sundowns ilahlekelwe umdlali ongasabi muntu njengo-Andile Jali, ngokusho kukaManqoba Mngqithi ongomunye wabaqeqeshi kuleli qembu elizihola phambili kwiDStv Premiership.
Okwenza uMngqithi osizana noRulani Mokwena noSteve Komphela akhulume kanje, indlela uJali abelixova ngayo ngesikhathi iSundowns izidlela amahlanga kwiPolokwane City kwiNedbank Cup ngoLwesithathu.
UJali ubegqamile kulo mdlalo njengoba eshaye elinye lama goli kwamane iSundowns enqobe ngawo iziqhatha ne-Orlando Pirates emzuliswaneni olandelayo walo mqhudelwano.
Le njini yeBafana Bafana ibuye ingabonakali esikimini ngenxa yezizathu ezahlukene kodwa uMngqithi uthi ngeke avume kalula ukuthi uJali ashiye kwiSundowns.
Awamile amahlebezi akhomba ukuthi uJali usekhathele ukushukusha ibhentshi kuleli qembu elibophele inqwaba yabadlali abanekhono elimangalisayo ikakhulukazi esiswini. Kuthiwa ufuna ukuhamba.
“Ungomunye wabadlali abamqoka eqenjini ngakho ukulahlekelwa nguye kungaba ishwa elikhulu. Siyakwazi anekhono lokukwenza kanti igalelo lakhe kwiSundowns liyabonakala futhi lisadingeka,” kusho lo mqeqeshi.
UMngqithi ukhombise izimpawu zokuyithokozela indlela uJali aziphatha ngayo osekumenze waziwa njengabanye babadlali abazigqajayo ngekhono labo.
“Indlela aziphatha ngayo enkundleni iyona kanye le emgqamisayo ngoba iyamcacisa ukuthi uhlukile kunabanye abadlali.
“Uma ekhona bonke abasuke bedlala naye nababhekene naye bayazi ukuthi ukhona ngoba uyakhonya kukona konke okwenzeka maphakathi nenkundla.
“Akesabi muntu okungenye futhi yezinto ezenza uJali ahluke kwabaningi. Impi yinto ahlale eyilindele futhi ngiyakuthanda lokhu ngaye,” kusho lo mqeqeshi.
Uyaqonda uMngqithi ukuthi aqhamukaphi la mahlebezi okuthi uJali angafuna ukuhamba kodwa unesifiso sokuthi kuzogcina kuwona (amahlebezi) ngeke kwenzeka okwangempela.
“Ibhadi lakhe ukuthi kwiSundowns noma ungadlala kahle kanjani kodwa uma uke waphazanyiswa okuthile weqiwa umdlalo noma emibili, kuba umzukuzuku ukuphinde ubuyele eskimini.
“Laba abebedlala engekho bebenza kahle kakhulu kodwa sijabule kakhulu ngendlela alisebenzise ngayo ithuba lakhe yize besivele sazi ukuthi yini azosinika yona,” kusonga uMgqithi.
Previous Previous post: Bambonge ngamaphuzu aphelele uMadlala abe-Arrows
Next Next post: Imidlalo yabesifazane iyothuthukiswa yibona uqobo – kumele babhukule